Ivo vanofunga kuisa mutero pabasa kubva kumba | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe kubva kuArgentina, vezvematongerwo enyika veGerman uye vezvehupfumi vaitaridzika kunge vanhu vakakomba Asi, tichitonga nenhau dzatichazotaura pamusoro padzo, vane zvivaraidzo zvakafanana nezvevamwe vavo munharaunda ino yepasi.
Deutsche Bank inofunga kuisa mutero kune avo vanoshanda kubva kumba.
Mamwe mazuva ndaitaura nemudzidzisi wepamoyo uyo akarasikirwa nebasa nekuti iyo yekurovedza kwaaishandira yaifanirwa kuvhara nekuda kweyakawandisa yekuisa yega muArgentina. Kufanana nevamwe vakawanda akawana nzira yekubuda mukudzidzisa ari kure chete kuti pachinzvimbo chekushandisa mhinduro dzenzvimbo seZoom, akashandisa mahara software(Pandinongomunyengetedza kuti andipe mushumo, ndinozvishambadza)
Iyo poindi ndeyekuti Akakwanisa kuwana vatengi vake (aimboshandira muhoro), vazhinji vacho vakamuudza kuti nzira iyi inobatsira zvakanyanya kupfuura kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri.
Sezvo, vanhu vazhinji vakaona kuti kushanda kubva kumba vachishandisa tekinoroji kwainyanya kushanda pane kuita kuenda kubasa zuva rega rega rekushanda. Asi, zvinoita sekunge havazi vese vanogutsikana neshanduko.
Kubva pane yakasununguka iyo yogati poto yavanogara mairi, ivo masystems kuDeutsche Bank yekutsvaga chikamu Ivo vanotenda kuti chero munhu anosarudza kushanda kubva kumba mushure mehosha anofanira kubhadhara iyi rombo.
Zano rako rinosanganisira mutero we5% kune avo vanoshanda "vachizvidira" kubva kumba. Ini ndinoisa makotesheni mukuzvidira nekuti vanozvinzwisisa kana pasina chisungo chakatemerwa neHurumende sepanguva yedenda.
Pfungwa ye kune vanhu vanoshanda kubva kumba se freelancer nekuti havawani imwe mhando yebasa, hazviite sekunge zvakamboitika kwavari.
Ivo vanofungidzira kuti chiyero ichi chinogona kuburitsa muunganidzwa wemakumi mana emamirioni emadhora pagore kuUS uye kwakatenderedza mabhiriyoni gumi nematanhatu emauro kuGerman. Izvi zvinogona kupa mari kune vanowana mari shoma uye vanokosha vashandi vasingakwanise kushanda pamba.
1 Nei uchifunga kuisa mutero pabasa kubva kumba?
2 Chii chiri seri kwechikumbiro ichi?
Nei uchifunga kuisa mutero pabasa kubva kumba?
Sekureva kwemano muDeutsche Bank tkushanda kubva kumba kunochengetedza mari pakufamba, masikati uye hupenyu hwemagariro - inopawo kuchengetedzeka kwemabasa nekuchinjika. Zvisinei, vanhu vanoshanda kubva kumba batsira zvishoma kune zvivakwa zvehupfumi uye nekudaro zvinogona kuwedzera kuderera kwekukura kwemitengo.
Ndinoreurura kuti ndakarasika pano. Ini ndinonzwisisa chinhu chekufambisa. Asi, vanhu vanoshanda kubva kumba vanoramba vachidya uye, kunze kwekunge vari vanyori vebhuku reLinux, vane hupenyu hwemagariro. Kunze kwezvo, zvakeIvo vane basa rekutenga nekuchengetedza michina yavanoshanda nayo uye yekubhadhara simba rinoitisa. Kune rimwe divi, nzira dzekufambisa dzinowanzo kuve dzakasvibisa uye dzinokanganisa traffic, nekusaishandisa ivo vanobatsira mukuvandudza mhando yemhepo uye kudzikisa nguva yekufamba kwevashandi vanokosha.
Ndine chikwereti kwavari kuti vatsanangure kwavanowana chengetedzo yebasa yakanaka kubva. Handigone kufungidzira kuti vanosvika sei pamhedziso iyoyo. Kana zviri izvo izvo avo vanoshanda vanopa zvishoma kune zvivakwa zvehupfumi, zvirinani zvinopokana. Kushanda kubva kumba kunounza vanhu mumusika webasa vangangodaro vasina kukwanisa kudaro; vadzidzi, vanaamai nanababa vevana vadiki, vari pamudyandigere uye vanhu vanoda imwe mari yekuwedzera.
Chii chiri seri kwechikumbiro ichi?
Imwe yemashoko kubva saiti kubva kwatakatora nhau dzinoita senge dzakarova chipikiri mumusoro
Kana bhangi tKana iwe uine yezvivakwa zvekutengesa chikamu chekudyara, iyo yekumba-pamba imba hofisi imwe nzira inofanira kunge ichidhura kune vashandi. Zvikasadaro, shongwe dzehofisi dzinowanikwa neDeutsche Bank dzichange dzisisina chinhu. Munguva pfupi pachave nemutero pakudya chikafu kana kurara kumba, kutsigira zvigadzirwa zvemaresitorendi nemahotera.
Deutsche Bank inoisawo mari mumafekitori ezvimbuzi? Ipapo pachave nemutero wekuenda kune yako yekugezera
Mumakore achangopfuura, Deutsche Bank yanga ichipinda mune akati wandei kubiridzira mari uye kutyora mutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ivo vanofunga kuisa mutero pabasa kubva kumba
Nhau dzinonakidza uye pachezvangu ndinotsunga kutaura kuti pfungwa iyi haina kubuda, nekuti ine hwaro hwakangoenderana nenzira nyowani yekushanda.
Ini handizive kuti hurumende dzeEurope neArgentina dzinounganidza sei mitero (sekutaura kwako). Asi kubva pane zvandiri kugara zuva nezuva muno muMexico uye zvichibva pabumbiro remunyika yangu, zvinotiudza kuti chero chiitiko chinoitwa neMexico zvese munharaunda yenyika nekune dzimwe nyika chinofanira kubhadhara mitero (mupiro wavo kunyika, kunyanya, kunyangwe kunyangwe pasi rese zviunganidzwa izvi kubva kuvagari hazvishandiswe sekufunga kwaungaita ...).
Kunyangwe izvo zvichingova zvinyorwa chete, kusvika mwedzi mishoma yapfuura muMexico zviitiko zvakawanda (zvehunyanzvi kana kwete), zvaive mubato (rekuti vaifanira kubhadhara mitero), ndiyo mamiriro emari inogamuchirwa kuburikidza neinternet (kushambadzira, mavhidhiyo , mipiro, nezvimwewo), pamwe nekushandisa senge Uber, didi (nezvose uye nzira dzayo dzekuendesa chikafu), pakati pevamwe.
Asi zvakatova kusvika gore rapfuura chete kuti shanduko dzakasiyana kumutemo dzakatanga kushanda zvekuti zviitiko zvakaita seizvi zvakapinda mupakeji yekuunganidza mutero kuMexico uye izvozvi zviitiko zvese izvi zvinofanirwa kupa muhomwe, saka ndinokuudza kuti hachisi chinhu chitsva , sezvo ini ndisingarangariri mushe munyika dzipi, rudzi urwu rwekubhadhara mutero rwuri kushanda.
Ndosaka kushanda pamba kusingaregerere iwe kubhadhara mutero, zvirinani kuno kuMexico uye ini handifungi kuti kune dzimwe nyika, (Ndinoziva vazhinji vedu tinofunga kuti kuba, asi pakupedzisira ndiwo mupiro wako se mugari wenyika yako) Kana iri mutero uri pairi kuMexico (Mutero Wezvigadzirwa Zvevashandi, kana ISR) zvakaenzana nemari yaunowana pamwedzi uye inotangira pa0% kusvika 35%.
Chekupedzisira, nezve chikamu chekuti kana izvi zvikaburitsa kuti mahofisi haabhadharwe, zvekufambisa kana zvekudya zvinoshandiswa uye nekudaro ivo vanoda kuwedzera kuunganidzwa, nezvimwe. Izvi kana zviri zveupenzi nekuti chero zvikaitika nenzira iyoyo, zvino inosimbisa kududzirwa kwekuti avo vanoita mari dzakadai kuenda kumabasa avo vanofanirwa kuwana mukana wekukwanisa kuburitsa mari yese iyoyo kuti uwane kunzvimbo yako shanda… uye pamwe chikamu ichi kana chakasiyiwa kubva pane chakadai chikumbiro.
Kubva pamadudziro andakaita nhau, izvo zvavanofunga mutero wekuwedzera kune izvo zvakatobhadharwa.
Hongu, uri kutaura chokwadi, sezvo nekudaro isina kutsanangurwa mushe mushe, saka inogona kuturikirwa mune zvese zviitiko sekunge yaibatwa sechinhu chitsva kana pane zvakatosimudzwa.
Kune nzanga mbiri, iya yavakakunda, vabereki vavo, sekuru nasekuru, sekuru nasekuru nasekuru, vachirwa nevadzvanyiriri.
Asi ikozvino, iyo yekutanga hondo yakashata uye yakasviba, tinovatengesera makristasi ane mavara, uye isu tinovaita varanda, kuitira kuti vatishandire.
Iyi nzanga yakakamurwa kuva vagadziri uye chiropa, vagadziri, kugadzira, zvinhu zvepanyama, mazano, hunyanzvi, hutano.
Uye zviropa, ivo vanofunga nezvazvo, vachirarama nevashandi, kurudyi uye kuruboshwe vakafa, kune chete zviropa uye vashandi.
Tinoda kuva muboka ripi?
Nyowani Intel kushupika yakamisikidzwa mune ese Ubuntu kuburitswa